🥇 ▷ IWatch-ka ayaa imaan kara bisha Oktoobar isla markaana ku dallacaya koronto la'aan ✅
IWatch-ka ayaa imaan kara bisha Oktoobar isla markaana ku dallacaya koronto la’aan
Qalabka smart ee Apple wuxuu yeelan karaa shaashad 2.5 inch ah
Waqtiyadi ugu dambeeyay waxaan aragnay tiro aad u badan oo xanta ah oo la xiriirta iWatch, laakiin sida maalmaha ay u socdaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saacadda smart ee Apple. Hadda, daadad si toos ah uga imanaya Aasiya waxay muujinayaan in aaladdaasi imaan karto inta lagu gudajiray bisha Oktoobar, oo astaamaha ugu weyn ay lahaan doonaan shaashad 2.5-inji ah iyo koronto la’aan.
Sidee iWatch ee Apple?
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan ka iftiimino wararka xanta ah ee ka soo muuqday Taiwan ee ka yimid gacanta Quanta Computer oo hadda baahinaysa AppAdvice, ayaa ah in iWatch uu soo gaari doono suuqa inta lagu jiro bisha Oktoobar, sida la sheegay goor dhow. Xitaa tani waa qaybta ugu kalsoonida badan ee macluumaadka, haddii aan tixgelinno in ilo-wareedyada Reuters ay si isku mid ah u tilmaameen isla maanta.
Sida laga soo xigtay isha, iyo sida aan saadaalinay, astaamaha ugu weyn ee lagu xaqiijin karo saacadda ugu horeysa ee caqliga leh ee Apple waxay ku xiran yihiin shaashadda 2.5 inji ahaan, waxayna taasi yeelan doontaa naqshad “waxoogaa dhinac ah”. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la rajaynayaa in uu la yimaado xiriiriye taabasho ah, oo laga yaabee inta ugu xiisaha badan, wuxuu ku keeni karaa nidaamka kicinta wireless-ka.
Intaa ka dib, wax kale oo liigitaan ah ayaa muujinaya in aaladda uu la imaan doono dareeye cabbira xaddiga garaaca wadnaha isticmaalaha xiran. Waxaa loo maleynayaa in qaybtaan yar ay si gaar ah u soo saari doonto shirkad laga leeyahay dalka Singapore, halka shaashadda ay mas’uul ka noqon doonto dadka LG Display, sida la filayo.
Wax soo saarka IWatch iyo qiimahiisa
Marka la eego tixgalinta ay tahay in la tixgeliyo markay timaado suuqa, waa inaan dhahno Apple He wuxuu qorsheynayaa inuu soo saaro, dhamaadka sanadka, qiyaastii 50 milyan oo unug oo ka mid ah smartwatchkiisii ​​ugu horreeyay. Jaantusku waa mid cajiib ah, wuxuuna ka hadlayaa wax yar oo ka mid ah laba shay: kalsoonida aad ku qabtid Apple, tan labaadna, in qiimaheedu uusan aad u sarrayn.
Sida saxda ah, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in marka la soo bandhigo iWatch, in la iibsan karo inta lagu gudajiro toddobaadyada ugu horreeya qiime u dhow $ 349. Haddii aan tixgelinno in inta badan had iyo jeer wax walba ay yimaadaan Yurub oo leh isbeddel aan macquul ahayn oo ah 1 illaa 1, aaladdaan. wuxuu ku kici karaa Spain qiyaastii 350 euro. Sabab ahaan, maahan waxa qofku u qalmi karo inuu yahay “raqiis.”